समाज Archives - Page 216 of 228 - Dna Nepal
नवराज सिलवाल अझै फरार (यस्तो छ प्रहरीको रिपोर्ट) २६ पुष २०७४, बुधबार १५:५३
काठमाण्डौं, पुस २६ । कार्यसम्पादन मूल्याङकनसम्बन्धि गोप्य सरकारी कागजपत्र कीर्ते गरेको आरोप झेलिरहेका एमाले सांसद तथा पूर्वडिआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्न ललितपुर प्रहरी असफल भएको छ । उनलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन महानगरीय प्रहरी परिसर..
मानहानी काण्ड–गोविन्द केसी छुटे, उल्टै फसे प्रधानन्यायधिस
काठमाण्डौं, पुस २६ । सर्वोच्च अदालतलाई अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई वकिलको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा..
बालिकालाई यौन दुर्ब्यवहार गरेको आरोपमा आर्मीका मेजर पक्राउ
काठमाडौं, पुस २६ । एक बालिकालाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा सेनाका सेनानी (मेजर) पक्राउ परेका छन् । मेजर प्रभवविक्रम शाहलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले पक्राउ गरेको हो । बुद्धनगरस्थित आफन्तको घरमा उनले १४ वर्षीया बालिकासँग अप्राकृतिक यौन..
‘कोसेली’ लिएर कास्कीकोटमा राजीव २५ पुष २०७४, मंगलवार १४:५४
पोखरा, पुस २५ । ‘चुनावका बेला जनतासँग भलाकुसारी हुँदा धेरै सहयोगका बाचा गरेको थिएँ । वहाँहरुले विस्वास गरिदिनुभयो । मैले जनताको मन र मत दुवै जितें । अहिलेसम्म मेरो जिम्मेवारी जनताको हातमा थियो, अव वहाँहरुको जिम्मेवारी मेरो काँधमा सरेको छ ।’..
डा. केसी आजपनि प्रहरी हिरासतमै, बहस बुधबार
काठमाण्डौं, पुस २५ । अवहेलना मुद्धामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसी आजपनि प्रहरी हिरासतमै राखिने छ । मंगलबार (आज) का लागि राखिएको बहस सरेपछि उनलाई हिरासत मुक्त नगरिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि पक्राउ परेका डा. केसीलाई विहान ९ बजे नै अदालतमा..
श्रीमती खोज्न पत्रकार गुहारे गिरानन्दले २४ पुष २०७४, सोमबार १५:३८
विराटनगर, पुस २४ । बूढीगंगा गाउँपालिका–२ का गिरानन्द पासवानले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नी श्रीमती अनितादेवी पासवानले रु तीन लाख र गरगहना लिइ पुस १५ गतेदेखि बेपत्ता भएको जानकारी गराए । एक १७ वर्षीय छोरा र दुई छोरी गरी तीन..
सामाजिक परिचालकलाई सकस २३ पुष २०७४, आईतवार १२:३९
प्रकाश ढकाल पोखरा, पुस २३ । कास्की ढिकुरपोखरीकी संगीता भण्डारी ६ बर्षअघि साविक ढिकुरपोखरी गाविसकै सामाजिक परिचालकमा नियुक्त भईन् । २०६८ सालमा पहिलो पटक सरकारले सामाजिक परिचालकको ब्यवस्था गर्दाताका नै उनले प्रतिश्पर्धा गरेर जागिर खाएकी हुन्..
रामघाट महिला समूहमा अनिताको निरन्तरता
पोखरा, पुस २३ । पोखराको रामघाट स्थित रामघाट महिला समूहमा पुनः अनिता तिमिल्सीना निर्वाचित भएकी छिन् । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म स्थल अर्घौ अर्चलेमा शनिवार सम्पन्न ८ औं साधारणसभा तथा ५ औं अधिवेशनले तिमिल्सीनाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय..
देशभर चिसो बढ्यो, अझै केहिदिन चिसो स्थिर रहने
हेटौँडा, पुस २३ गते । पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै जम्मु कास्मिर हुँदै हिमालमाथिबाट हावा आएकाले देशभर चिसो बढेको छ । चिसोले देशभरकै जनजिबन प्रभाबित बनाएको छ । मानिसहरुलाई बाहिर हिंडडुल गर्न समेत समस्या भएको छ । चिसोले बिशेषगरि बालबालिका,..
स्याङ्जाली तमुको ल्होसार शुभकामना तथा बधाई
पोखरा, पुस २२ । पोखरा बस्दैआएका स्याङ्जाली तमुहरुले खि ल्होसारको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा बधाई कार्यक्रम गरेका छन्। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा सांसद देवप्रसाद गुरुङले गुरुङ जातिको उत्थानका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता..